Hevitra MPANOHARIANA | Martsa 2009 |
Hatezerana sy ompa izany azoko androany izany an!
2009-03-19 @ 21:40 in Politika
Aza taitra amin'ny lohateny ianao, na dia misy fahamarinany ihany aza izany nanjo ahy izany. Nanomboka androany alakamisy 19 marsa 2009 no tena nanaovako ity fitsapana ny hevitry ny olona amin'ny ankapobeny amin'ny toe-javatra ankehitriny. Tsy afaka miteny ny any ivelan'Antananarivo aho fa izay azoko nanaovana izany no nanaovana izany, ireo mpifanena sy mifankafantatra tarehy fotsiny fa tsy voatery ho mpifanerasera. Sarotra fantarina amin'izay tena ao am-pony ny olona fa tsy maintsy itadiavana hevitra tsy ampoizina. Tsy miresaka amin'izay efa tena fantatro hevitra intsony aho fa ireo tena baraingo amiko ny safidiny no nanaovako ity andrana ity. Ahoana ary hoy ianao? Etsy ary fa zavatra tsotra ilay izy!
Rehefa hitako mitady hila resaka ilay olona dia vetivety dia fantatra ny heviny. "Ahoana e? Dia arahabaina fa nahazo filoha vaovao isika e!" na "arahabaina fa nahazo filoham-pirenena vaovao isika e!" na "arahabaina fa nendresy ny tolona e!" sady mitady ny tanany hoharabaina ianao. Eo noho eo ihany dia azonao ny valiny. "Filohanareo izany fa tsy anay!" na "izahay tsy nifidy azy" na "Filoha amin'ny ahoana koa e?", ireo no atao hoe valinteny mihaja indrindra fa betsaka ny nanompa tamin'ny valin'arahaba... Fa ahoana kosa? hoy aho nanatsafa, ary dia ambarany tsy miahotra ny heviny. Tena variana aho fa maro dia maro tokoa no tsy mankasitraka izao fitondrana tetezamita izao. Tsoriko kosa fa misy dia misy tokoa ny faly sy ny mamaly tsy sazoka fa vitsy dia vitsy ry zareo mitaha amin'izay tezitra. Tsy haiko aloha fa mety ho nisafidy loatra izay nanontaniako angaha aho.
Zavatra iray azoko notsoahina avy amin'io dia ny mety ho fahatsapan'izay miresaka amiko fa ny tsy mankasitraka no maro kokoa noho izay mankasitraka sy faly. Lazain'ny gazety sy haino aman-jery vahiny diso fantatra moa fa maro ny nifety tamin'ny fotoana nahazoan'i Andry Rajoelina ny PHAT (Présidence de la Haute Autorité de la Transition), saingy raha notarafina tety amin'ny nisy anay aloha, isy dia nisy tokoa ny nitabatabam-pifaliana fa ny hafa kosa nangina toa tsy niraharaha izany. Mety hisy ihany koa anie ny fahamenarana noho ny zava-mitranga e!
Izany eo ihany, fa tezitra toa nanao fandrahonana ambadika mihitsy ingahy Komandà nitondra ny filohan'ny FJKM hogadraina tany amin'ny tobin'ny Capsat, ary ny heloky ny pasitera tamin'izany moa dia mbola naveriny tamin'ny mpanao gazety ihany fa "mpamadika" izy, henjana koa izany antom-panenjehana izany! Tsy mendrika ny maha-pasitera anao, hoy ranamana ny ataonao, mamorona fotsiny fa "tsy nisy nampisotro amany azy izany". Nanao fanambarana manko ny foibe FJKM ka niteny izany fampisotroana fivalanan-drano nampanaovin'ny miaramila azy izany tamin'ny iray amin'izy ireo ny Mpitandrina Lala Haja Rasendrahasina. Nanao fotoam-pivavahana moa ny FJKM teny Andrainarivo fahasoavana omaly, ho an'ny filohan'ny FJKM, noho ny fisamborana azy ary nahazo olona io fotoana io na dia tanaty ora fiasana aza. Heverina fa mbola hanao izany ny FJKM indray alahady, ka na inona na inona fandraisanao azy, zavatra hafa no mety ho fandraisan'ny olona azy ka entiny hanehoany ny "heviny" izay tsy voatery hankasitraka izao fitondrana voafidim-bahoakan'i 13 mey izao io fotoana io raha tanteraka, hanehoany olona ihany koa fa tsy matahotra ramatahora velively ny olona fa mitady filaminana kosa. Mety hisy zavatra hitranga amina fiangonana FJKM (fandrobana na fahamaizana) iray va re? Enga anie ka tsy hisy satria hiampanga tena izy raha mitranga izany! Na izany na tsy izany miandry ny Asabotsy sy izay fahamaroan'ny olona ho tonga eny Mahamasina ny mpitazana. Niniako natao koa ny "manasa ny olona" ho tonga eny fa ahafantarana ny hevitry ny olona ihany koa io, rehefa miala bala izy dia fantatrao avy hatrany ny heviny... na tsy voatery ho marina 100% aza izany paikako izany!
jentilisa, 19 marsa 2009 amin'ny 23:40
17 marsa 2009: Lasan'i Andry ny fahefana!
2009-03-17 @ 22:01 in Politika
Efa hitantsika teto ihany fa nomen'ny filoha Ravalomanana ho an'ny manana voninahitra amin'ny tafika ny asa sy ny andraikitry ny filoham-pirenena. Mety ho mahavariana tokoa ny tsy nanomezana io fahefana io ho an'ny filohan'ny Antenimieran-doholona. Izay famindram-pahefana noho ny fialana. Heveriko anefa, noho ny fahazarana eo amin'ny fandraharahana fa mety ho tsy mifanaraka loatra amin'ny fepetran'ny Lalampanorenana, no nanaovany izao fihetsika izao. Karazana fahadisoana ihany izay lalana nataon'ny filoha tsy nanaraka ny voalazan'ny Lalampanorenana izay saingy tsy mahavaha olana velively ny famindrana ny fahefana araka ny voalaza. Fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila manko no misy eto ka vahaolana mifandraika amin'ny asa miaramila no noraisiny. Mety tsy te-hamindra ny tsindry mahazo azy ho an'ny filohan'ny Antenimiera ny lehilahy.
Ny ankamaroan'ny olona dia nandre fotsiny hoe "niala, hono, Ravalo" araka ny nolazain'ny onjam-peo vitsivitsy. Tsy misy mahafantatra izay tena votoatiny. Ny tahaka anay aloha dia tsy nino mihitsy fa miandry ny fanambarana mivantana ataony ihany, efa be loatra manko ny tsaho sy ny do-tany sy kapo-tandroka fanao amin'izao tolona politika izao. Tamin'ny radio fahazavana tamin'ny telo sy sasany mahery teo ho eo amin'izay no re tsara ny teniny nanome fisaorana ireo rehetra niara-niasa taminy hampandroso an'i Madagasikara ka tafiditra ao anatin'izany mazava ho azy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ny famindram-pahefana (fa inona tokoa moa no mahasamihafa izay fomba filaza izay amin'ny teny hoe 'fametraham-pialana? io fiteny io manko no nampifanolana ihany koa ny filoha Phillibert Tsiranana tamin'ny Lehiben'ny tafika ny Jeneraly Ramanantsoa sy antony nanaovana ny fitsapa-kevi-bahoaka tamin'ny oktobra 1972).
Tsy nisy tena nahare ny votoatin'ny taratasy ihany koa ireo rehetra nantsoina tao amin'ny Bucas Antanimena indrindra fa ireo avy amin'ny fitondrana an-dalambe nahazo hery be noho ny miaramila mpioko. Akory moa ny fahatezerana teo amin-dry zareo rehefa fantany amin'izay ny voasoratra. Nivoaka ny efitra ry zareo miaramila mpioko niaraka tamin'i Andry Rajoelina, ka nanambara indray ilay fomba fiteny mahazatra hoe "tsy misy mahazo mivoaka eo!" ny iray tamin'izy ireo. Vao nivoaka ny Jeneraly iray dia raikitra ny ankamahana basy sy ny tabataba avy amin'izay tsy lazaina intsony. Nampidiriny tao anaty fiara io. Vao nivoaka ny efitra ihany koa ny filohan'ny FJKM dia raikitra ny hoe "ity no tena mpamadika" Raikitra ny tositosika sy ny totohondry nampidirana io mpitondra fivavahana io tao anaty fiara. "Hisy raha any Soanierana" hoy ny iray tamin'ireo teo an-toerana. Letra avokoa ny ankamaroan'ny mpijery. Dia nampidirina tao anaty fiara ihany koa ny Jeneraly roa hafa nivoaka tao amin'io toerana io. Hatezerana tsy hatezerana moa no nasehon-dry zareo miaramila tao anatin'izany rehetra izany. Vao eo ampanombohana isika izao. Tsy fantatra mazava ny nahazo ireo Jeneraly telo mirahalahy voatanan'ireo miaramila mpioko ireo fa dia nanao fanambarana mazava namindra ny fahefana 'fitondrana miaramila' ho an'ny "Filoha" Andry Rajoelina ry zareo sady nanasonia ny didy hitsivolana "voalohany sady farany" mifandraika amin'izany famindram-pahefana izany niaraka tamin'ny filohan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana taloha efa elaela ihany dia Atoa Ratsirahonana Norbert Lala izany.
Nolazain-dry zareo moa fa "izao fanambarana izao dia nataonay an-tsitrapo tsy misy teritery ho fitsinjovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena." Sarotra ihany anefa ny hieritreritra izany saingy izao, tsy hanaiky mihitsy ny miaramila mpioko raha tsy amin'Atoa Andry Rajoelina no hanomezana ny fahefana feno amin'ny maha-"Filoha avon'ny Tetezamita" azy. Vita hatreo izany ny tolona politika teo amin'ilay zalahy ity fa dia hiasa amin'izay ny tenany. Manahy dia manahy aho raha ny zavatra hita androany no ijerena ny ampitso fa dia tena faneriterena tsy misy toy izany no hihatra amin'ny tsirairay hanatanterahana ny sitrapon'ny mpitondra vaovaon'ny firenena izay lazaiko sahady fa tsy ekeko satria an-terisetra no nanaovany ny zavatra rehetra. Dia ahoana izany ry zareo ilay nambarako hoe "inona no hitranga amin'ny 18 marsa 2009?
jentilisa, 17 marsa 2009 amin'ny 23:59
Directoire militaire: mikorontana tanteraka i Madagasikara!
2009-03-17 @ 14:44 in Politika
Nanome ny fahefana ny directoire militaire hanao ny asan'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra Atoa Ravalomanana. Tsy nanaiky izany ny miaramila mpioko ka dia nosamboriny avokoa ny jeneraly dimy heverina ho manana ny grady ambony indrindra sy zokiolona indrindra. Nosamboriny ihany koa ny pasitera Lala Rasendrahasina araka ny vaovao nampitain'ny Radio Antsiva amin'izao fotoana izao. Mbola misaritaka tanteraka ny eto an-tanàna amin'izao fotoana izao.
Fivoriana saiky hatao tao Antanimena tao amin'ny katolika no nisian'izany toe-javatra izany izao folakandro izao.
jentilisa, 17 marsa 2009
Fa maninona no matahotra fitsapa-kevi-bahoaka fadiranovana? sy zavatra hafa!
2009-03-16 @ 22:28 in Politika
Eo ampanafihana ny filoham-pirenena moa amin'izao fotoana izao ny antsoina hoe tafika malagasy, nefa tsy manakana ahy hilaza ny biby mampatahotra ny mpanohitra sy ny tafika aloha izany izao, ka mahatonga azy ireo maika amin'izao zavatra kasainy izao. Ninia naka ny fihevitr'ireo mpomba ny fanonganam-panjakana amin'izao fotoana izao aho io takariva io ka ny tao amin'ny mpiara-miasa ihany no nitsapako izany. Ninia aho nody nanomboka ny teny hoe: "tsy hitako izay ilana ny referendum".
Nivoaka ho azy ny hevitra rehetra, na ny an'ny mpanohana na ny an'ny mpanohitra ny referendum. Tsy misy ilàna izany intsony fa efa niteny ny vahoaka, hoy ny nambara, dia tena ny tenin'ny filohany navela teo. Efa vita, hoy izy izany referendum izany, hala-bato no ho ao anatin'izany. Fandrika izany, ary ny tena mahavariana dia ny teny hoe "raha tiana hivaha ny olana dia miala Ravalo ihany no izy." Ninia amin'izay aho nanolo-kevitra hoe : Omena anareo manontolo ny minisiteran'ny atitany sy ny fikarakarana ny referendum, ka ahoana? sahy ianareo sa tsy sahy? fa tsy nisy nety namaly io tolo-kevitra io. Inona no dikan'izany? Mahatsapa ihany ry zareo fa tsy haharesy na oviana na oviana rehefa tena anontaniana ny amin'ny heviny mihitsy ny mpankasitraka izao fanonganam-panjakana mivantana ataon'ny tafika amin'izao fotoana izao. HIta tsara fa na ilay lehiben'ny tafika "vaovao" aza dia nitsipaka marindrano io fitsapa-kevi-bahoaka io. Manontany anareo rehetra manantsaina eto amin'ny aterineto manohana izao fanonagnam-panjakana izao indray aho. Ahoana? sahy ve ianareo amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka fa omena anareo ny minisiteran'ny atitany? saino ary ny antony isalasalanareo...
Nahoana ary Ravalomanana no nanaiky, na nanao io tolo-kevitra io e? Amiko, izany no tena fomba demaokratika arahin'ny firenena rehetra fa tsy izao mifampizara seza lava izay handaniam-bola amin'ny tsy misy dikany izany. Io no lalana tsotra indrindra amin'ny marimaritra iraisana nefa hifamely ambadika hatrany tsinona. Nefa tsy io ve ny fomba tsara indrindra? raha heverina ho 30% ankehitriny ny salam-pitokisana ny filoha frantsay Sarkozy no manao ny tahaka izao ataon-dRavalomanana izao dia miala ho azy izany i Sarkozy! Anontaniana fotsinyhoe ekena mbola hitondra sa tsia, dia atahorana mafy! Mbola samy hotsarain'ny tantara ary isika rehetra!
Fanontaniana manaraka? Nahoana ny mpanohana an-dRavalomanana no vonona hiaro azy ankehitriny, miaritra ny hatsiaka sy ny orana mety ho avy, miari-tory, vonona ny hisedra fahafatesana sy ny basy aman-tafondron'ny miaramila? Tsotra! mahatsapa izy ireo fa voahosihosy ny safidiny ary indrindra indrindra ny fiandrianam-pireneny. Resy lahatra izy ireo fa misy firenena vahiny te-hamotika an'i Madagasikara amin'ny fomba rehetra rehefa tsy ho "voazanaka" amin'ny fomba ankolaka nahazatra azy hatramin'izay. Lasa mariky ny fitiavan-tanindrazana, nolovaina tamin'ny Menalamba rehefa resy teo anoloan'ny tafiky ny mpanjana-tany ny tafika malagasy talohan'ny fanjanahantany. Tsaroanareo ve? Ny hasin'ny mpanjaka Ranavalona III ihany sisa no fantatry ny Menalamba tiany arovana fa ny hafa rehetra tsy nisy noraharahiany intsony. Dia tahaka izany koa ny ankehitriny. Lasa ny sata sy ny ain'ny filoham-pirenena sisa no mariky ny fiandrianam-pirenena Malagasy amin'izao fotoana izao. Toy ny adidy ny miaro izay sisan'ny fiandrianam-pirenena Malagasy izay. Mahazo maneso ny taranak'i Rasanjy rehetra, raha tojo fahafatesana ireo olona ireo, saingy tsy ho adinoin'ny tantara na oviana na oviana izao hetsika fiarovana ny filoha sy ny ainy izao.
Manaraka izany, misetra ny tafika eo aminy ihany ireo mpanohana an-dRavalomanana ireo. Mampahatsiahy tantarana firenena iray izany dia i Chili nialoha ny fitondrana miaramila sy jadona nataon'ny mpanongana azy: Fantatrao ve na tadidinao ve fa nisy izany Salvador Allende Gossens izany? Olo-tsotra no niaro ny lapany tompoko ary ny tafika tao aminy ihany no nanafika ireo olo-tsotra ireo. Tany amin'ny taom-polo 70 izany ry zareo. Ankehitriny, eto Madagasikara indray no misy izany toe-javatra izany. Tsarovy fa na ho inona vokatr'izao fanonganam-panjakana izao na ho inona, hipetraka eo anivon'izao tontolo izao ny tantara fa nisy izany Madagasikara izany, olo-tsotra no niaro ny filohany ary ny tafika tao amin'ny kosa no mitetika ny hisambotra, na hamono ny filoha... tantara hampisaina ny taranaka aoriana hieritreretany fa nisy izany Malagasy maro niaro ny safidiny izany, na dia teo aza ny fahalemen'ny filohany. Ho henatra ho an'ireo nanafika kosa ka ho afeniny tsy hampahafantariny ny taranany fa izy ilay nitam-piadiana hanafika filoham-pirenena manana olo-tsotra maro vonona ny hiaro azy na dia eo aza ny hery tsy mitovy!
Koa na iza ianao mpamaky na iza! na inona safidinao na inona! efa manana tantaram-pitiavan-tanindrazana ho reharehan'i Madagasikara sahady ny mpanohana ny filoham-pirenena Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Soa ihany aho fa tsy ao anatin'ny tafika amin'izao fotoana izao na dia nofinofy fahakely aza izany ho zandary izany! Mahazo mihomehy na mitsiky ianao izay tsy mankasitraka ny fanolora-tenan'ny mpanohana ny filoha saingy tsarovy fa ho tonga eo amin'ny feon'ny fieritreretanao ihany, ary ahiako hisandohanao aza izany hoe... "izahay niaro an-dRavalomanana fony nanongana azy ny miaramila" tahaka ireo be dia be milaza ny tenany ho mpitolona menavazana tamin'ny 1947. Farany, ianareo mpamaky ny bolongako... tadidinareo ve ny ankamantatro hoe inona no hitranga amin'ny 18 marsa 2009 izay andro faha-77 amin'ity taona 2009 ity? Milalao ny isa ahafantarana an-dRavalomanana ihany koa ny mpanongana azy amin'izao fotoana izao ka ny hany ambarako anao etoana: izao alatsainainy alina, ny talata ary ny alarobia izao no ho mafy indrindra ny fiarovana ny filoham-pirenena (ny talata alina indrindra indrindra)... Izay ihany no hambarako fa tsy hilaza ny tohiny aho na dia efa fantapantatro aza izany! (mbola tony aloha ny eny Iavoloha amin'izao ora anoratako izao)
Ity misy zavatra noadinoiko!
Mahalasa saina ahy lalina ity: Nahoana no amin'izao fotoana izao fa hanendry ny masoivohony ny Frantsay? Mahavariana io toe-javatra io, ary manahy aza aho fa mety io mihitsy no mitondra mpikarama an'ady hafa any na mpiara-miasa ho amin'ny fanakorontanana an'i Madagasikara. Tena tsy mino kisendrasendra amin'ity raharaha ity aho tsinona.
jentilisa 17 marsa 2009 amin'ny 00:28
Fandrobana isaky ny mahazo vahana ny TGV sy ny baraziny
2009-03-09 @ 21:53 in Andavanandro
Efa tsy takona afenina intsony. Vao nisy ny fiokoana miaramila milaza fa "miaraka amin'ny vahoaka" ka nampiseho ny talentany teny Ankadimbahoaka ny mpioko dia fandrobana ny score sy ny leader price avy hatrany no tao an-tsaiko omaly iny. Tsy te-hanoratra izay mihitsy aho omaly fandrao lazaina fa izaho no nampirisika, nitombina tanteraka ny ahiahiko fa ny Francepub sy ny Jumbo score ary ny courts mbamin'ny SFOI no tratra fa mba tsy vita kosa i Leader Price. Inona no nitranga? natsangana ny barazy hanakanana izay tsy fantatra fa ny tena tanjona voalohany dia ny hakana vola izay mandalo amin'ny fiara rehetra. Nanararaotra ny fisarahan'ny mpitandro ny filaminana ry zalahy dia nataony izay tiany. Mbola sahy mampirisika ny hananganana ny barazy ihany etsy ankilan'izany atoa Alain Ramaroson fa izany, hono, no antoka tokana hanakanana ny fandrobana... nefa moa efa lasa mivandravandra ho an'ny rehetra hoe avy amin'iza no tena mpamaky ny tranombarotra horobaina.
Koa satria tsy handray andraikitra ny mpitandro ny filaminana amin'izao fandrobana mahatsiravina, 26 janoary 2009-bis notontosaina androany 9 martsa 2009 izao, dia niantso ny mpanohana ny ara-dalàna sy tsy manaiky ny hisian'ny barazy arahina fandrobana ny tao amin'ny radio mada. Nolazaina ho nanomboka tamin'ny 11 moa ny antso, izay vao natao io hadiva ho atoandro io ka tampoka ihany dia nahazo olona ihany ny teny Mahamasina nanomboka tamin'ny 2 ora teo. Nahavariana moa fa tsy sahy nitsofoka lalina tany akaikikaiky tany ny mpanao gazety fa natahotra ny ho voadaroka angamba. Ny an'ny mpanohana ny TGV kosa moa dia ilay efa araka ny nosoratako teo ihany, tsy misy afa-tsy ny fanavoana barazy efa fitakiam-bola sy arahina fandrobana ihany no entiny hanoherana ny fandrobana. Samy manana ny heviny tokoa aloha.
Fa karazany tahaka ny ahoana ny tena nivorian'ny mpitady filaminana tetsy Mahamasina? toromarika ny teny ka tsy hitako loatra izay lazaina, na ny marina kokoa dia tsy afa-nankeny aho noho ny asako, ny vokany fotsiny no nisy henoko. Nandrava barazy teny Tsarafaritra Tsimbazaza ny mpanohana an-dRavalomanana araka ny filaza azy, nafana tokoa ny fifampitorahana, fa manana miaramila mitam-basy miaraka aminy ny mpanao barazy ary nalaza avy hatrany fa tamy ihany koa ny avy any amin'ny Capsat (mpioko) hanohitra an-kery ireto mpandrava barazy ireto. Dia lasa ny saiko... hiaro ny vahoaka tokoa ve? be loatra ve ny fampihorohoroana ny vahoaka? leon'ny fandatsahan-dra ve? toa tsy izany mihitsy no tsapako amin'ireto miaramila ireto. Samy mitsara koa ny tsirairay.
Na izany na tsy izany, lasa fakantahaka tampoka teo ny fokontany 67ha avaratra andrefana (aleo lazaina amin'izay fa efa nisy gazety nilaza tsinona) tsy manaiky na oviana na oviana izany barazy izany. Ka mahatonga ny faritra manodidina tsy ahitana izany barazy izany. Angamba tiana ny hampielezana ny "andrimasom-pokonolona tsy manaiky ny isiana barazy" manerana an'Antananarivo koa dia izay aloha no atao. Tsarovy anefa, ny eto aminay tsy misy idirana fanohanana olona fa tsy fanekena barazy fitakian'ny jiolahimboto vola no iraisana. Ataoko fa tsy mahavita ary tsy hanao izany ny mpanohana ny TGV satria handroba minisitera aza mety hatao raha vonona ny olony. Asa izay ho fipoaky ny ampitso aloha fa mihamafana ny toe-draharaha... tsy mahalala izay fahasahiranan'ny any ambony any fa fiarovana ny sisa mijoro tamin'ny fandalovan'ny rivodoza olombelona masiaka eto Antananarivo no nijoroan'ny teny Mahamasina.
Mialoha ny farany, na eo aza anefa izany fahavononana izany, samihafa ny mandeha an-tongotra sy ny mandeha fiara. Ny tany amin'ny score digue sy ny shoprite Talatamaty indray no novakian-dry lemaizina ny tolakandron'ity andro ity. Tena potehina Antananarivo sy ny toe-karenany e! Tsy azoko mihitsy indraindray ny mbola mahatonga ny hafa mbola mifikitra amin'ilay toe-tsaina te-handroba sy ny fanao mirona mandrakariva amin'ny fandrobana. Mbola aiza izany raha sanatria hitondra ny firenena?
Farany, faly aho fa maro tamin'ny sosokevitra nosoratako tany alohaloha tany no noraisin'ny fanapahan-kevitry ny fanelanelanana teny Ambohimanambola Le Hintsy ka ny roa tononiko tsara dia ny "Fiarovana an'i Andry Rajoelina" sy ny "Fanaovana fihaonambem-pirenena amin'ity volana martsa ity" ka hotanterahina indrindra izany amin'ny 12-14 martsa ho avy izao. Kisendrasendra ve sa nisy tamin'izy ireo ny namaky ny bolongako? Na izany na tsy izany, manana fifaliana anaty avy amin'izany fanapahan-kevitra izany aho.
jentilisa, alatsinainy 9 martsa 2009 amin'ny 23: 53